Anebon iye phambili izixhobo ukuba ikunike uluhlu olubanzi lweenkonzo machining CNC, kuquka umama wekhaya, sijike, EDM, ucingo ukusika, umphezulu ukugaya ngaphezulu. Sisebenzisa amazwe 3, 4 kunye namaziko machining-5-axis CNC ukuba banikele kuwe ngqo enkulu, ukuthamba emangalisayo, yaye imveliso ophucukileyo phantse nayiphi na iprojekthi machining. Thina nje ukuba oomatshini ezahlukeneyo, kodwa iqela leengcali, abazinikezeleyo ekuboneleleni kuwe noompondo zihlanjiwe-in-class nkonzo China. ubucukubhede anobugcisa Ungasebenzisa ezahlukeneyo izinto zeplastiki kunye nentsimbi ukuvelisa iindawo ukujika nokugaya.
Siyakuqinisekisa ukuba akukho nto ubungakanani yomsebenzi, iingcali zethu kukuthatha oku ngokungathi ezabo. Kwakhona ukubonelela ngeenkonzo prototype CNC machining eya kukunceda lokufumana umfanekiso ocacileyo imveliso yokugqibela.
Anebon iye kwinkokeli imveliso iimveliso ezintsha. Elithile Integrated Services iye aziwa ubuchule kunye neenkqubo. Inkampani ivelisa amacandelo iklasi metal phantse lonke ihlabathi. iinjineli yethu iya kusebenza kunye ukuqinisekisa umgangatho kuyilo bukhulu iimveliso kunye nebandla. inkonzo lwabathengi Excellent nolwaneliseko uphawu adume ngayo inkampani yethu esisiseko kwimpumelelo yethu ishishini.
Ngexesha - Siyaqonda ukuba ezinye iindawo umsebenzi wethu ube osikiweyo engxamisekileyo, kwaye sinazo izakhono neendlela zokuqinisekisa ukuba siqhuba ngexesha ngaphandle kokuqhatha umgangatho umsebenzi esiwenzayo.
Abanamava - Besisoloko ngokubonelela ngeenkonzo CNC wekhaya iminyaka engaphezu-10. Siye ndawonye uluhlu olubanzi koomatshini kokuba phambili ngakubhalileyo ngokoluhlu olubanzi iinkqubo kwaye zibe liqela abanamava iinjineli kunye nabasebenzisi ukunika iimveliso ezikumgangatho ophezulu kubo bonke abaxumi bethu.
Ukufaneleka - Xa ukwahluka koomatshini zethu, siyakwazi ukuqinisekisa ukuchaneka kwazo zonke izinto zonke ubungakanani na.
Yintoni CNC machining?
CNC machining yinkqubo lemveliso yeyeemeko yolwazi izinto ngokusebenzisa ezahlukeneyo izixhobo ngendlela ahlabayo. software Advanced isetyenziselwa ukulawula isixhobo ngokwenkcukacha loyilo 3D. Iqela lethu zokuba iinjineli kunye ubucukubhede iinkqubo nezixhobo nokwandisa ixesha, umphezulu sekugcineni kunye nonyamezelwano yokugqibela nokusika ukuhlangabezana neemfuno zakho. Sisebenzisa CNC machining ukuvelisa kuphela nxalenye AMAGQABAZA ▸, kodwa ukwenza izixhobo umngundo.
Elisezantsi Volume-Ulwenziwo lokuthile
Manufacturing imithamo ephantsi isisombululo efanelekileyo ekulawuleni uluhlu yakho nokuvavanya imarike phambi ukuvelisa ngobuninzi ezinkulu. ngokukhetha elisezantsi Volume-Ulwenziwo lokuthile na indlela engcono.
Anebon aya kuyinyula iteknoloji processing eyona ndlela ngokutsho umbandela, unyango komhlaba kunye nobungakanani. , Kodwa kwakhona ukunika zokubopha kunye nezinye inkonzo enye.
Yethu CNC Machining, proto ngokukhawuleza kwaye elisezantsi Volume-Ulwenziwo lokuthile efanelekileyo kushishino emininzi enjalo, njengoko Cars, yezithuthuthu, Imitshini, Iinqwelomoya, bullet train, iibhayisekile, Watercraft, Electronic, izixhobo Scientific, Laser theatre, Iirobhothi, Oil & Gas Control Systems, izixhobo Medical , isiginali nokufumana izixhobo, izixhobo Optical, Ikhamera & Photo, izixhobo zemidlalo Beauty, Izibane, yefanitshala badla.,
CNC machining iyilungele kuluhlu lwakho kweemfuno zophuhliso lwemveliso. Nazi ezinye iingenelo okuchaneka machining:
(1) Inkqubo iinkcukacha zenzelwe uya kuqinisekisa umgangatho processing of iinxalenye umatshini (okanye umgangatho ibandla umatshini) kwaye ukukhawulelana neemfuno zobuchwepheshe ezichazwe kwi imizobo noyilo.
(2) Le nkqubo kufuneka ibe imveliso eliphezulu kwaye imveliso kufuneka ufakwe kwi emarikeni ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka.
(3) Zama ukunciphisa iindleko zemveliso
(4) Nikela ingqalelo ekunciphiseni izinga Ukuxelenga abasebenzi ukuqinisekisa ukhuseleko lwemveliso.
Uhlobo lwesixhobo processing
Kukho iintlobo ezininzi izixhobo zokwenza enokusetyenziswa wedwa okanye zidityaniswe kunye nezinye izixhobo xa amanqwanqwa awohlukileyo inkqubo yokuvelisa ukufikelela inxalenye geometry oyifunayo. Iindidi Isixhobo processing eziphambili:
• Izixhobo uyadika: Ezi zixhobo ezo ngokuqhelekileyo zisetyenziswa nezixhobo agqibileyo ukwandisa imingxuma okusikiweyo okudlulileyo kulo mbandela.
• izixhobo Cutting: Izixhobo ezifana iisarha kunye isikere zizixhobo ummeli ukusika izixhobo. Ngokuqhelekileyo zisetyenziswa ukusika izinto kokuba ubungakanani kwangaphambili, ezifana noxwebhu otyhidiweyo, lube yinto oyifunayo.
• Isixhobo yokugrumba: Olu didi lubandakanya i ukujikajika kabini-mbini ukuba kudala umngxuma ngaxeshanye setyhula ezimanyeneyo ujikelezo.
• izixhobo Ukugaya: Ezi zixhobo usebenzisa ivili ejikelezayo ukuba machining entle okanye ukusika nezincinane workpiece.
• izixhobo Milling: izixhobo Milling sebenzisa i batshintshana ukusika komhlaba kunye ifaka eminzinzi ukudala umngxuma non-setyhula okanye ukusika kuyilo ekhethekileyo evela eziphathekayo.
• Ukuphendula izixhobo: Ezi zixhobo ukutshintsha-workpiece kwi nomphini gama isixhobo ukusika iimilo kuyo.
Carbon Steel, 4140,20 #, 45 #, 4340, Q235, Q345B, etc
SS303, SS304, SS316, SS416 njl
Al6063, AL6082, AL7075, AL6061, AL5052, A380 njl
12L14, 1215, 45 #, A36, 1213, njalo-njalo
HSn62-1, HSn60-1, HMn58-2, H68, HNi65-5, H90, H80, H68, H59 etc
C11000, C12000, C12000, C26000, C51000 njl
Delrin, nenayiloni, Teflon, PP, pei, ABS, PC, PE, POM, Peek.Carbon Fibre
Treatment Surface Mechanical
Sand uqhushumbiso, Shot xa kuthe kwakho imbabala, Ukugaya, Rolling, ipolishi, ihlamba, Ukutshiza, Umzobo, Oil Irestyu njl
Chemical Treatment Surface
Bluing kunye Blackening, Phosphating, Pickling, Electroless nesingxobo Metals eyahlukeneyo kunye aluminium njl
Treatment Surface Electrochemical
Anodic oksijini, Electrochemical wokucoca, Electroplating njl
Zemithambo, iPVD, Ion umzila, Ion nesingxobo, Laser Surface Treatment ect.
Xa kuthe kwakho imbabala Sand Dry, Wet Sand xa kuthe kwakho imbabala, Atomized Sand ukuqhumisa njl
Electrostatic ukuspeyita, Udumo ukuspeyita, Powder ukuspeyita, Plastic ukuspeyita, Plasma sokutshiza
Copper nesingxobo, chromium nesingxobo, Izinki nesingxobo, Umzimveliso nesingxobo
iindawo ezikhupha , aluminium ukulahlwa, zinc izitho ukulahlwa kufa, aluminiyam kufa uphose , izahlulo eyahlulayo kufa , izahlulo aluminiyam zifa bephosa ;